Kwilizwe lezemidlalo, isiteji esisikiweyo sinye kuphela inqanaba lezityalo oza kudibana nayo njengomdlali okanye umbukeli. Nangona ayengavamile namhlanje, yayisetyenziswa rhoqo kwii-Elizabethan ngamaxesha kunye nakwiivenesi zangekhulu le-19. Isigaba esivakelweyo somdlalo esetyenziswayo namhlanje sivela kwixesha le-raked. Kuba ngabadlali kunye nabadlali, ukwenza kwinqanaba le-raked kukho imingeni ekhethekileyo.
Isiteji esisikiweyo sakhiwe kwinqanaba elikhuphukela phezulu kwaye lide ukusuka phambili kwinqanaba, elibizwa ngokuba yi-apron.
Iqondo le-slope, elibizwa ngokuba yi-rake, lahluka ngokubanzi kwiimeko zembali kwaye lingaba lukhulu. Izigaba zanamhlanje zincinci kakhulu, ngokuqhelekileyo zine-degrees 5 okanye ngaphantsi. Ziye zixhaphake kakhulu namhlanje eYurophu, kunye nezithethe zayo ezisezantsi, kunokuba zikhona e-US Enye ikhefu lwakutshanje lusetyenziswe kwi-Broadway version yomculo "uBilly Elliot."
Iimidlalo zaseMerika ezinamaqhinga okusisigxina awakhiwe ngaphambi kwekhulu lama-20, njengeFiladelphia Academy of Music okanye i-Historic Ford yeTheater eWashington DC Ukuba umdlalo uqhutyelwa kwi-theatre yaseMelika, amathuba okuba isakhiwo esakhiwe loo mveliso. Ividiyo ephulukana nexesha lokuveliswa kwe "Cat kwi-Tin Tin-Hot," umzekelo, indlela ejabulisayo yokubona ukuba isalathisi ibonakala njani.
Imbali yeSiteji esiRaked
Kwixesha likaShakespearean, iithala zakhiwa ngendawo evulekile phambi kwesigaba, apho ababukeli abahluphekayo, ababizwa ngokuba yi-groundlings, bemi ukubukela imibukiso.
Babedla ngokukhawuleza, bengenangqiqo, bengacingi nto yokubamba abadlali xa bengathandi ukusebenza okhethekileyo. Abathengi abacebile babehleli emagqabini eebhokisini zangasemuva, kude ne-riff-raff.
Ukuqhubela isiteji kwavumela amalungu angeniswe kwixesha elikhawulezayo elenzeka kufuphi nabaphulaphuli ukuba babonakale.
Xa umlingisi wayemele awele, wayekwenyuka ngokwenene kwinqanaba okanye phantsi. Isikhundla esinokubaluleka kweso sigaba sabangela ukusetyenziswa kwemigangatho yokuphakanyiswa kwemigangatho, isigaba sokuqala, kunye ne-downstage, zonke ezo zisetyenziswa namhlanje.
Ukwenza kwiSiteji esiPhakathi
Kubadlali beendawo zokuzonwabisa, i-raked isigaba sinokuphucula umgangatho wobunzulu nobungakanani bendawo yokubhala okanye yokuchonga. Kuba ngabadlali kunye nabadlali abajwayele ukwenza kwiinqanaba ezicwangcisiweyo, nangona kunjalo, isiteji esinokukhangela singabonisa imingeni. Eyona nto ixhaphakileyo yindlela yokuziva ebonakalayo emzimbeni, apho abanye abadlali abatshoyo kunokubenza bazive bengenakunqandwa. Abanye abadansa bayakhalaza nge-vertigo xa beqhuba kwinqanaba le-raked, kwaye umngcipheko wokulimala ngokwasemzimbeni unokunyuka, ingakumbi ukuba ukusebenza kufunekile. Nangona kunjalo, ezi zintlupheko zingaphelelwa kunye nexesha njengomdlali okhulayo oqhelekileyo kwisigaba.
Anderson, Jack. "Amanqanaba athatywayo kunye noMdaniso ongabalulekanga." I-New York Times . 19 Novemba 1987.
Cohen, Sara. "I-Theater yeTheater emva koko i-Vs Now: Kutheni iStage Slanted?" I- Ford's Theater Blog . Ukufikeleleka ngomhla wama-22 uNksye 2017.
> Fierberg, uRuthie. " Ukudansa indlela yabo yokulimala. " Backstage.com . 29 > Dec. > 2009.
I-Jazz Isolation Routine
AmaHoksi angama-4/20 amaHoksi namaMemes